Apple Watch ma u tahay isboorti xad dhaaf ah? Bloomberg ayaa tiri haa | Waxaan ka socdaa mac
Sida lagu sheegay warbixin cusub oo uu daabacay wariyaha Bloomberg ee Mark Gurman, Apple ayaa laga yaabaa inay ka fiirsanayso inay soo saarto Apple Watch oo ay la socoto dacwad loogu talagalay inay saacadda ka ilaaliso cayaaraha xad dhaafka ah. Saacaddan cusub (xitaa haddii ay banaanka ku jirto oo keliya) xitaa waa la heli karaa, sida uu qabo falanqeeyaha, isla sanadkaan 2021. Marka haddii aad ka mid tahay kuwa jecel inay qaataan Apple Watch ku dhowaad meel kasta, waxaa laga yaabaa inaad xiiseyneyso tusaalahan.
Falanqeeyaha Apple ee Bloomberg ayaa ku shaaciyey dukumiinti cusub in Apple laga yaabo inay ka fiirsaneyso inay soo saarto Apple Watch cusub sanadkan, laakiin loogu talagalay dadka isticmaala. jecel isboortiga bannaanka iyo gaar ahaan cayaaraha xad-dhaafka ah. Sababtoo ah way cadahay in saacada shirkada loo isticmaalo isboortiga, laakiin adeegsadayaal badan kuma dhiiran karaan inay u isticmaalaan maxaa yeelay aad ayey u jilicsan yihiin. Xaqiiqdii, suuqa waxaa ka buuxa kiisas gaar ah oo loogu talagalay saacadaha iyo cayaaraha.
Maaha markii ugu horeysay in Apple ay tixgaliso smartwatch oo leh astaamahan. Shirkaddu waxay ka fekertay sii deynta nooc ka mid ah cayaaraha isboortiga xad dhaafka ah oo ay weheliso asalka Apple Watch, kaas oo la sii daayay 2015. Haddii Apple ay horay u socoto xilligan, nooca rooga ah wuxuu noqonayaa nooc dheeri ah oo la mid ah sida ay Apple u bixiso xulasho hoose qiimaha sida SE iyo daabacaadyo gaar ah oo lala wadaago Nike iyo Hermes. Mararka qaarkood waxaa loo yaqaan "Explorer Edition" gudaha Apple, badeecadu waxay lahaan doontaa waxqabad la mid ah kan caadiga ah ee Apple Watch, laakiin leh caabbinta dheeraadka ah iyo ilaalinta khadka Casio ee saacadaha G-Shock.
Falanqeeyaha ayaa ku dhiiranaya inuu saadaaliyo, tusaale ahaan, in qalab cusub laga dhigi karo mid "xoog badan" isaga oo siinaya gogol caag ah. Sidan oo kale waxay u adkaysan lahayd waxyeelada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple Watch » Apple Watch ma u tahay isboorti xad dhaaf ah? Bloomberg ayaa leh haa
Hilde Lisko Chronicles wuxuu kusoo laabtay Apple TV + June 11